रविले खोले वास्तविकता :सालको पातबारे एरपोर्टमै – भिडियो - सुदूर नेपाल
रविले खोले वास्तविकता :सालको पातबारे एरपोर्टमै – भिडियो
Dinesh khaptadi February 21, 2019 0
काठमाण्डौ । करिब एक महिने विदेश यात्रा सकेर नेपाल आइडलका बिजेताहरु स्वदेश फर्किएका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टुरका रुपमा अष्ट्रेलिया पुगेका नेपाल आइडल रवि ओड सहितको टोली बुधबार स्वदेश फर्किएको हो । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को दोस्रो सिजन ‘नेपाल आइडल २’का प्रतियोगी देश बाहिर हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिन भ्याई नभ्याई रहेको अवस्थामा पनि उनीहरु विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
नेपाल फर्कने क्रममा उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै केही मिडियाहरूले स्वागत गरेका थिए भने टिमसँग केही प्रश्नहरू समेत गरेका थिए । अस्ट्रेलियाको शो कस्तो भयो, कति ठाउँहरूमा शो गरियो यस्ता यावत प्रश्नहरू गरिएका थिए भने नेपाल आइडल २ विजेता रवि ओडलाई भने केही समय यता उनी विवादित बन्न पुगेको गीत सालको पात टपरीको बारेमा पनि सोधिएको थियो ।
हालै मात्र अस्ट्रेलियामा भएको कार्यक्रम सक्काएर नेपाल आइडलका टप ६ प्रतिस्पर्धी रवि ओड, विक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी, सुमित पाठक, अमित बराल र पवन गिरी नेपाल फर्केका छन् । एक महिने लामो अन्तर्राष्ट्रिय टुरमा रहेका उनिहरु हिजो साँझ मात्र अस्ट्रेलियाको कार्यक्रम सक्काएर नेपाल आइडल टिम नेपाल फर्केका हुन् । साथै अहिले भाइरल भइरहेका लोक गायक पशुसित शर्मा र उनको गीत लुट्न सके लुट् कान्छा गीतको बारेमा पनि सोधिएको थियो जसमा उनले यस्तो जवाफ दिएका थिए ।
Previous Post: सेयर गरौ ! प्रतिभालाई पेशा र पोशाकले रोक्दैन भन्ने उदाहरण यी जवानले दिए पछि (भिडियो सहित)
Next Post: अचम्म ! विवाह गरेको केहि मिनेटमै एक जोडीले गर्यो डिभोर्स